Caawin maqalka iyo muuqaalka - BBC News Somali
Caawin maqalka iyo muuqaalka
29 Oktoobar 2013
Su'aalaha lais waydiiyo ee kusaabsan maqalka iyo muuqaalka taleefoonnada Gacanta:
Waxyaabaha la xiriira maqal iyo muuqaalka telefoonnada gacanta?
Sidee maqal iyo muuqaal uga daawan karaaa ama uga dhagaysan karaa teelfoonka gacanta.
Si aad BBC-da uga daawato muuqaal ama maqal uga dhagaysato waxaad u baahantahay Mobile dhamaystiran. kadibna waxaad u baahantahay inaad furto SIM card-ka ama Line kaaga. intaas kadib ayay suurta galaysaa inaad xogtii laguu soo mariyo GPRS. intaas wixii dheer ee faahfaahinka kala xiriir shirkadda adeedga kusiiso.
Hab noocee ah ayaan wax uga soo dajisan karaa BBCSomali.com?
Adeegyada Mobayl-ka aan ku bixino waxaa ka mid ah:
Qiime intee laeg ayaa ku bixi karo inaan wax dhagaysto ama Daawado?
BBC-du wax lacag ah kaama doonayso si aad muuqaal iyo muqaal uga daawato ama uga dhagaysato, Balse waxaa laga yaabaa shirkadda adeegga kusiisay inay kugu soo dalacdo qiimaha kolba inta aad isticmaasho. Hadii aad rabto inaan xaqiijiso qiimaha ay kuugu kacayso la xiriir shirkadda adeegga ku siisa.
BBC-du ma qaadayso mas’uuliyadda wixii qarash ah oo laguugu soo dalaco dhagaysiga maqalka muuqaalka boggeenna.
Sidee ayaan u xadidi karaa qiimaha aan muuqaalka ku daawado ama cod ku dhagaysto.
Waxaa jirta dhawr siyaabood oo ad ku xadidi karto qiimaha muuqaalka lagu soo dajiyo:
- Khadka gal. muuqaalka mobayl-kaaga kujira caadiyan waxaad ka helikartaa computer-ka caadiga ah.
- Waax iibsataa data bundle adigoo shirkadda halmar ka iibsanayo in kugu filan muddo bil ah ama maalin welibo . Taas waxaa ay kaa caawin in aad internet-ka isticmaasho muuqaalana soo dejisato. Taas waxa ay ku anfacaysaa hadii aad aad u isticmaasho khadka. Faahfaahin intaas ka badan kala xiriir shirkadda adeegga kusiisa.
- Isticmaal Wi-Fi. in badan oo kamid ah taleefoonnada gacanta hada waxaa ay ku yimaadaan ayaga oo Wi-Fi leh. taas waxaad ku dhimi kartaa qiimaha aad website-keena ku isticmaasho, wireless-ka waxaad ku isticmaali kartaa guriga ama goobaha kale ee leh. hadiise aad hubin in taleefoonkaagu leeyahay Wi-Fi waxaad ka xaqiijin kartaa shirkaddii taleefoonka samaysay oo aad la xiriito ama shirkadda adeegga kusiisa.
- Waxaad isticmaashaa Bluetooth. Qaar kamid ah Muuqaalada aad BBC da ka heli karto waxaa aad ku dirsan kartaa Bluetooth haddii ay taleefoon kale ku jiraan, sidaa daraadeed waxaad wadaagi kartaan asxaabtaada.
Intee in laeg ayay igu qaadan inaan soo dejisto?
Waxaa ay kuxirantahay xawaaraha khadka aad isticmaalayso, balse caadiyan muuqaalada iyo codadka kooban waxaad kula soo degi kartaa hal ilaa labo daqiiqo markaad isticmaalayso 3G, intaas kayarna markaad Wi-Fi isticmaalayso, Shayba shayga uu ka wakhti badan wakhtiga aad kusoo dejisan kartaa way kasii dhertahay.
Miyan sare u qaadi karaa tayada codka?
Tayada codak ee telefoonnada qaar ayaa hoosayso, waxaad adeegsataa samaacadaha dhegaha la geshado.
Miyaan awoodaa in aan mobayl-kayga toos uga dhagaysto barnaamijyada idaacadda kabaxa marka ay toos u socdaan?
Wakhti xaadirkan ma bixino adeeg aad mobile-kaaga toos ugala socon karto barnaamijyada idaacadda BBCSomali.com.